Myanmar Idol Season4ရဲ့ ဒိုင်(၃)ယောက်ကို ကြေညာလိုက်ပြီ - Cele Platform
Myanmar Idol Season4ရဲ့ ဒိုင်(၃)ယောက်ကို ကြေညာလိုက်ပြီ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူကြည့်ရှု့မှုများတဲ့ Myanmar Idol Season4အတွက် 11.6.2019 ရက်နေ့၊ရန်ကုန်မြို့၊ Novotel Hotel မှာ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် Myanmar Idol Season –4စာနယ်ဇင်းမီဒီယာရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနား ကို နံနက် 11:00am မှ နေ့လည် 1:00pm အထိ Myanmar Idol Facebook Page မှ တိုက်ရိုက် Live ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်…..
အဲဒီလုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာ Season4အတွက်ဒိုင်(၃)ယောက်ကို ကြေညာလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်….
ဒိုင်သုံးယောက်ကတော့ တင်ဇာမော် ၊ ဖြူဖြူကျော်သိန်း နဲ့ ဦးအောင်ကိုလတ်တို့ဖြစ်ပါတယ်…..
Host အတွက်ကတော့ နှစ်စဉ်လုပ်နေသူဖြစ်တဲ့ ကျော်ထက်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်…..
မွနျမာနိုငျငံမှာ လူကွညျ့ရှု့မှုမြားတဲ့ Myanmar Idol Season4အတှကျ 11.6.2019 ရကျနေ့၊ရနျကုနျမွို့၊ Novotel Hotel မှာ ကငျြးပပွုလုပျသညျ့ Myanmar Idol Season –4စာနယျဇငျးမီဒီယာရှငျးလငျးပှဲအခမျးအနား ကို နံနကျ 11:00am မှ နလေ့ညျ 1:00pm အထိ Myanmar Idol Facebook Page မှ တိုကျရိုကျ Live ထုတျလှငျ့နပေါတယျ…..
အဲဒီလုပျခဲ့တဲ့ပှဲမှာ Season4အတှကျဒိုငျ(၃)ယောကျကို ကွညောလိုကျပွီဖွဈပါတယျ….
ဒိုငျသုံးယောကျကတော့ တငျဇာမျော ၊ ဖွူဖွူကြျောသိနျး နဲ့ ဦးအောငျကိုလတျတို့ဖွဈပါတယျ…..
Host အတှကျကတော့ နှဈစဉျလုပျနသေူဖွဈတဲ့ ကြျောထကျအောငျပဲဖွဈပါတယျ…..
ဦးဝီရသူအတွက် ချီတက်ဆုတောင်းပွဲ ဦးဆောင်တဲ့ သံဃာလေးပါးနှင့် လူငါးဦးကို အမှုဖွင့်